को cruiser "आकर्षक" कहाँ छ? उहाँले के सपना?
को cruiser "आकर्षक" कहाँ छ? त्यो उहाँले घण्टा मा 2017 मा "सपना", बिहान को Neva भन्दा rises गर्दा? कति वर्ष पहिले, यो उत्तरी राजधानी थुप्रै पाहुनाहरूलाई चासो छ। रूसी संघ को वस्तु संस्कृति एक धनी इतिहास छ। महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति एक भविष्य पौराणिक कथा निर्माण सुरु फिर्ता 1896 मिति। 1900 मा, जब Tsar निकोलस द्वितीय उपस्थित शुरू। किरण को रोमन देवी को सम्मान मा - व्यक्तिगत उहाँले नाम "आकर्षक" गरे।
तिनीहरूले अन्तिम लडे
1903 मा "डायना" को बाल्टिक बेडा को 1st रैंक को संरक्षित cruisers सञ्चालन हालिदिए थियो पछि, धेरै पानी बग्ने गरेको छ। तर, कथा अझै पनि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गामा धारण। मई मा कप्तान 1st रैंक Evgeniya Egoreva को आदेश अन्तर्गत रूसी इम्पेरियल नौसेना को 1905 रुकी Tsushima को प्रसिद्ध युद्ध मा भाग। लडाई को एक ठाउँमा 224 दिन यात्रा। तीन समुद्रहरू सैन्य chroniclers मार्फत मुश्किल संक्रमण एक कमाल रूपमा मानिन्छ।
थियो सधैं त, अब को रूप मा, cruiser "आकर्षक"। आधारित कहाँ छ शोरूम, seething जीवन अनुकूल टीम, लडाई-तयार र खुला। जहाजको डाक्टर Kravchenko मानिसहरू, आँखा मा सीधा हेर्न भनेर बरु sullenly भन्दा, को डेक भन्दा उडान भने, छिटो र स्पष्ट आदेश कार्यान्वयन उल्लेख गरे। जब प्रतिद्वन्द्वीको भारी घाटा (हत्या कमान्डर ई आर Egorev) वसूल, रूसी जंगी जहाजको टोली नष्ट युद्धमा सामना ज्ञात छ, जस्तै। तर साहसी नाभिकहरु को लज्जित केही थियो: तिनीहरूले जीवन र मृत्यु को लागि लडे। भाग्य नयाँ परीक्षण को लागि "आकर्षक" राखिएको छ।
फेरि बादल कपाल मा
जापान को सागर मा घाइते पहिलो मरम्मत, जहाज मनिला (फिलिपिन्स) मा भयो। मर्मत, संग्रहालय जहाज buoyancy पुनर्स्थापित अन्तिम वसन्त पूरा भयो। यो शब्द वर्ष मात्र छ - क्षणमा। वास्तवमा, यी कोसेढुङ्गामा बीच समुद्र महत्त्वपूर्ण घटनाहरू थियो। को cruiser "आकर्षक" कहाँ छ? सेन्ट पीटर्सबर्ग मा मा रात जुलाई 16, 2016 मान्छे एक कठोर चित्र हेर्नुभयो।
प्रतीक लेनिनवादी क्रान्तिको उच्च गति Neva नदी साथ बित्यो। उहाँले जहाँ Petrograd embankment आफ्नो सामान्य पार्किंग को ठाउँमा मरम्मत थियो Kronstadt डक देखि सारियो। क्रूजर पहिलो विश्व युद्ध बाँचे। , परिवर्तन सुरु गर्न एक संकेत "जो बारेमा यति लामो Bolsheviks बताउनुभयो।" - आफ्नो बन्दूक खाली volley दिनुभयो त्यसपछि शीतकालीन दरबार stormed। उहाँले tsarism पतन भएको थियो। देश समाजवाद र साम्यवाद गर्न leaps र सीमा गएको छ।
एक सय वर्ष पछि, समाजवादी लाभ OBLIVION मा फिक्का। र यो उहाँको झगडा छैन गरौं, र संग्रहालय, को बाँध्न आज छ। अब cruiser "आकर्षक", अन्य नयाँ जीवन उम्लिरहेको, सेन्ट पीटर्सबर्ग को क्षेत्रमा जस्तो छ के मा। पर्यटकहरु, पाठ्यक्रम, यो राम्रो टोलीमा नविकरण छ पक्का, पहिले जस्तो, ताजा रंग cruiser संग gleaming, बनाउन हुनेछ "मानिसहरू सीधा आँखा मा, बरु sullenly भन्दा देखिन्छ।"
को forties मा, द्वितीय विश्व युद्ध को आगो द्वारा झुलसे, जहाज बन्दुक बिना बसे: तिनीहरूले एक ब्याट्री गठन लगियो। हिमालहरू र सुपारी Kirgorf, दुई को खुट्टा मा स्थापित सात - कीव राजमार्ग लागि। 1948 मा, cruiser नौसेना देखि शुरू भएको थियो, र 1957 मा संग्रहालय पोत भयो।
karapasnoe पोत प्रत्यक्ष सम्झनाहरु (एक Armored cruiser डेक, बाङ्गो चाप संग) देखि। धेरै वर्ष को लागि देखेको निःशुल्क थियो। यो cruiser सख्त गार्ड अन्तर्गत 2011 मा घटना पछि थियो विश्वास छ। त्यसपछि जो जहाज सम्म भयो, जवान मान्छे को एक समूह झण्डा हल्लाउँदै र विद्रोह लागि कल shouting। यात्राहरु को नयाँ नियम को परिचय बाट बुरा बन्न छैन। पौराणिक कथा पनि steeper भएको छ।
वस्तुहरूको धेरै नयाँ हो: समय, ग्रेनाइट महल नष्ट बालुवा जहाज जीर्णता परिणामस्वरूप, शहर प्रवेश गर्छ। मूल घटक जहाँ अब? क्रूजर "आकर्षक" बारम्बार reconstructed थियो। तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ: 1980 को ओवरहाल एक सुन्दर Nevsky remake मा गरियो। "घर पोर्ट" केन्द्रीय नौसेना संग्रहालय थियो।
अर्को तय 2014 मा शुरू भएको थियो। आठ सय र चालीस लाख rubles - त्यसपछि लागत रकम सुनिन्थ्यो। महत्वपूर्ण अवस्था सार्वजनिक हेरविचार र फिर्ती थिए। को cruiser 21 सेप्टेम्बर मा बिहान मा Petrograd embankment बाँकी। धेरै दर्शक आफ्नो आँखा विश्वास गर्न सकिएन: को tug "संग्रहालय" छानिएको र Neva नदी मा झिकेर - युरोप मा तेज नदीहरूको एक।
यो एक "स्मारक एक ठोस स्तम्भ मा," र एक वास्तविक जहाज छ! एक विपरीत - "आकर्षक" यसको पाठ्यक्रम पालना गर्न सकिएन। अभाव समयमा सेन्ट पीटर्सबर्ग धेरै दुखी: आकर्षक "कहाँ cruiser छ" "? एक चमत्कार भयो फर्कनुहोस्। राति, मे 16, 2016 उहाँले पार्किङ सबै "जहाजमा यात्रा गर्नु" फर्के। यस्तो घटना लेट घण्टा सारिएको थियो किन मानिसहरू छक्क परे?
सायद ताकि जो cruiser अन्तर्गत पारित गर्न दिन तीन पुल पतला छैन? सेन्ट पीटर्सबर्ग गर्न Kronstadt देखि "क्रान्तिकारी" चार tugs, परिवहन प्रहरी डुङ्गा, आपतकालीन डुङ्गा र अन्य सुरक्षित सँगसँगै थियो। तेल टैंकरों, को वोल्गा साथ मार्चिङ, तरिका दिनुभयो।
रात अद्यावधिक अन्तिम संग सभामा आए गर्नेहरूका लागि एउटा अवरोध भएन। bonnets बाहेक, आकाश मा quadrocopter उड्यो: मालिकको एक bird's-आँखा दृश्य संग अभूतपूर्व घटना कब्जा गर्न चाहन्थे, सबै बाँकी - एक उडान चमत्कार को पृष्ठभूमिमा एक तस्बिर लिन। "आकर्षक" यो के गर्न सजिलो थिएन, धेरै छिटो थियो!
एक अर्को पछि Annunciation, महल, खोलियो त्रिएक पुल उनि भन्छन्, रूप, र "होइन, त्यो लेट थियो!" केवल चिम्नी देखि धुवाँ रात आकाश मा पग्लियो थियो। हो! पाइप को एक असल पुरानो (वा बरु अशान्त) पटक जस्तै धूम्रपान,! तिनीहरूले यो ऐतिहासिक पुनर्निर्माण धेरै खुसी थिए भन्न! राम्रो तस्वीर हेर्न, स्थिति र निषेधित क्षेत्रमा पार्क एक कार को छत चढेका।
यो विषयमा गहिरो समर्पित छन् जो मान्छे, जहाज नेभिगेसन प्रणाली, जो वास्तविक-समयमा पोत यातायात निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ स्थापना गर्नुभएको दुःख पोखे। तिनीहरूले objected: मान्छे, र cruiser "आकर्षक" उठ्नेछ जहाँ यति थाह छ। को Petrograd embankment मा! यसलाई बिहान पाँच मा भयो।
राम्रो हुन, मेरो हजुरआमा क्रान्तिको!
पाइप देखि धूम्रपान - आधा छ। विशेष अवसरमा क्रांति को पौराणिक कथा एक तोप गोलीबारी आगो हुनेछ। दृश्यहरु क्षीण छैन हालको कला हासिल गर्न, यो स्थापित हुनेछ, र आवश्यक त फुकाल्नु गर्न। जहाँ अब cruiser "आकर्षक", भिडियो क्यामेरा खडा। आफ्नो मद्दत, कानून प्रवर्तन संग।
रूसी छिटो को मल्टिमिडिया संग्रहालय को छ हल ..., नाभिकहरु कुरा हुनेछ एक सय वर्ष निशान जो Tsushima, प्रथम विश्व युद्ध, 1917 को क्रांति, यो ककपिट मा होलोग्राम जलसैनिक को पर्यटकहरु जस्तै छ, खाजा (धेरै छाला महसुस यो शवर मा जस्तै कोका प्रशंसा) खाने थियो, र अन्य नयाँ वस्तुहरू।
हरेक सभ्य संग्रहालय मा रूपमा, त्यहाँ एक प्रदर्शनी "आकर्षक" उपहार, Leningrad को रक्षा को सहभागी, र यसको चालक दल छ। विश्व युद्ध cruiser पछि जीवनको बारेमा सुन्न रोचक एक धेरै। अब तपाईंलाई थाहा छ कि cruiser "आकर्षक" कहाँ छ। भावना को प्रामाणिकता बारेमा हजुरआमा तपाईं अपरिचित बन्न तपाईं नयाँ चिबुक सम्मिलित पछि भन्ने मजाक गाइड। विद्यार्थी बुझ्न र स्वास्थ्य र समृद्धि सुरुतिर को नाम "हजुरआमा" गर्न इच्छुक छन्।
संसारको होटल मा भोजन विभाग र रिसोर्ट्स गूढ रहस्य
को पेन्जा क्षेत्रको मुख्य आकर्षण
उत्कृष्ट गुणस्तर को एउटा लेख कसरी लेख्ने
जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग मा रहन: यात्रा सुझाव
किन सेतो कबूतर को सपना? oneiromancy
इन्सुलेट र विनिर्माण
ओसेसियन Name विवाह
ODON MVD आरएफ - Dzerzhinsky प्रभाग, Balashikha: समीक्षा, फोटो, ठेगाना